Safidy Alemana | mamorona hoavy tsara kokoa
Herin'ny vehivavy any an-dranomasina | Ny 1. Manamboninahitra Tompon-tsiraka Rainbow
Manao ahoana ny maloto ny làlanao? | Ny sari-tanin'ny oksizenina azota ao Greenpeace
Ny fivoahan'i Kohl miaraka amin'ny RWE: fialan-tsiny na fifamaliana?
Fitrandrahana Opencast Garzweiler (1985 mankany 2016)
Boaty pensilihleitung boaty vita amin'ny tavoahangy shampoo
Fa maninona no alehan'i Alemaina manondrana fitaovam-piadiana any amin'ny faritra krizy? | Podcast momba ny fandriam-pahalemana
Ahoana ny fiasan'ny Greenpeace?
Ilay fitsangatsanganana maoderina "maitso" amin'ny kintana pop
Inona ny atao hoe maintso?
Ireo izay te hampihena ny sidina fa tsy te-hiala amin'ny fialan-tsasatra mahafinaritra dia afaka mieritreritra alternatives. Any Eropa dia maro ny safidy azonao tsapanao [...] more
Iza no tsy mahalala: "Superfood Bowl" mahasalama amin'ny sary hipster Instagram, toy ny guacamole amin'ny fety na ho an'ny sakafo maraina amin'ny mofo misy atody [...] more
Seit einiger Zeit steht die Befürchtung im Raum, dass die Digitalisierung Auswirkungen auf Beziehungen und die Sexualität der Menschen haben könnte. Diesen Zusammenhang untersuchte die […] more
Greta Thunberg ist seit knapp einem Jahr die wohl bekannteste Jugendliche, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Neben Thunberg gibt es jedoch noch viele andere […] more
Ohatrinona ny sakafo atoronao? Sakafo miaraka amin'ny sisa
Manipy sakafo ve ianao? Ny ankamaroan'ny olona dia hamaly hoe: "Tsia!" Fa ny zavatra hafa kosa dia milaza zavatra hafa: araka ny filazan'ny minisitry ny sakafo sy ny fambolena federaly "dia atsipy daholo ny rehetra [...] more
Azo tanterahina ve ny CO2 hatramin'ny 2050?
Ahoana ny momba ny fahafantarana marina ny fepetra raisin'ny tongoloary? Moa ve ny vokatra azo araka ny nantenaino? Amin'ny taona [...] more
Tehirizo ny sakafo - fampiharana mahasoa ho anao
Efa nanontany tena ve ianao hoe avy aiza ny sakafo sisa? Na ny sakafo avy any amin'ny tsena lehibe? Mandroaka sakafo ho anao ve indraindray, izay [...] more
Veganism: fepetra ilaina amin'ny etika miaraka amin'ny tombony azo antoka amin'ny 1. Novambra ny Andro Vegan World. Ny tsy raharahian'ny maro na ny manafina dia inona ny maha-veganism ny: zon'ny biby, [...] more
Rhineland Palatinate, fantatra ihany koa amin'ny hoe "German Tuscany" dia malaza amin'ny olona tia kolontsaina amin'ny fararano. Ny antony hoatr'izany dia tsy ny fijinjana voaloboka ihany, izay amin'izao fotoana izao [...] more
Zaridaina maoderina mora, fikarakarana maoderina no hita ankehitriny manoloana ny ankamaroan'ny trano. Iaraha-mahalala fa ny famaohana sy ny henan-tsakafo dia tsy anisan'ireo fotoanan-dehibe ankafizin'ny olona maro, fa [...] more
Azo atao ve ny mifehy ny rafi-kery fanefitra amin'ny alàlan'ny fifohana rivotra? Azo arovana ve ny aretina? Manao ahoana ny herin'ny fahefan'ny vatanao? Miaraka amin'ireo sy ireo maro hafa [...] more
Solika palmie: Ianao ve mijery ny ivon'ny fonosana?
Ny ala maina eran'izao tontolo izao dia esorina amin'ny fomba maro samihafa sy ho an'ny tanjona samihafa. Izany dia mitondra olana maro izay tsy azon'ny maro [...] more
Tany misy: Ny trano ampy fanao vita amin'ny fanariam-pako
7 nizara8 Votes
"Volamena ny fako". Io dia fanambarana izay maheno an'i Michael Reynolds matetika. Saika 50 taona lasa izay, ny voalohany Earthship [...] more
Quelle Miaraka amin'ny paikady saika 13 tapitrisa, dia lasa mahazatra amin'ny lahatsary nataon'i slam ny tononkalo tamin'ny taona 2013 ny lahatsary nataon'i Julia Engelmann. Ny fihetsik'izy ireo [...] more
Azonao an-tsaina ve, raha mahatsapa sorena ara-pihetseham-po amin'ny fiainana andavanandro ianao, mba hiresaka amin'ny fampiharana iray? Iray amin'ireo lafiny tsikera amin'ny fitsaboana ara-tsaina [...] more
Fomba fahita mahazatra ankehitriny i Burnout, indrindra eo amin'ny toeram-piasana. Ity dia momba ny endrika fahakiviana manokana izay mamaritra ny fepetra be loatra / havizanana izay [...] more
Isa-maraina mba hifoha amin'ny alimo sy ny fanasokajiana ny heriny voafetra - ho an'ny sasany, ity isan'andro. Ankehitriny, maro ny olona mahalala ny fomba hitohizany [...] more
Labiera labiera, hena masira ary mpitsidika an'arivony talohan'ny volana Oktobrafest tsy voatery ho fiarovana ny tontolo iainana. Saingy miaraka amin'ny fitomboan'ny saina sy ny fiheverana ny [...] more
Indray aho tsy sahy nankany Wiesn any Munich rehefa avy nandao azy nandritra ny roa taona. Na eo aza izany dia andramako manokana ny zavatra niainako tamin'ny [...] more
Izany hoe ho an'ny mafana mafana ny indostria avy amin'ny iray amin'ny fivarotana akanjo ho an'ny 15 Euro dia tsy voatana avy amin'ny volon'ondry merino tsara indrindra, fa ny quasi avy amin'ny kitapo plastika [...] more
Iza no tsy nandro taminà shampoo anti-tavy mora sy manitra toy ny fofom-bavony-vanila-plastika Oethker? Safidy iray ho an'ny [...] more
Fangatahana sy firosoana tany Alemana
Eto isika dia manangona ny fangatahana sy firosoana ankehitriny any Alemana. more
Rahampitso dia toa ny 4 rehetra. Andro manerantany momba ny biby. Efa dimy ambin'ny folo taona lasa izay, ny mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby Maqi no nanondro io fotoana io fa ireo mpikatroka momba ny zon'ny biby [...] more
Loharano avy amin'ny savony maimaimpoana ho an'ny mpanasa bisikileta-tanana dia misy ny hevitra maro mamorona sy maharitra izay efa novolavolaina. Ny ankamaroan'ireo zavatra noforonina ireto dia [...] more
Iza no tsy tia mihinana pancakes? Amin'ny vilia sasany, izay tsy vegan dia mandalo amin'ny iray na hafa iray amin'ny fifaliana amin'ny fihinanana. Tsy izy ity [...] more
Miantsena any amin'ny fivarotana tsy misy fonosana Amin'izao fotoana izao dia misy fivarotana tsy misy fonosana saika isaky ny tanàna - ianao ihany no mila manangona izay tsy maintsy hohaninao eo akaikin'ny [...] more
Soso-kevitra 1: Fiantsenana varotra tanana faharoa amin'ny fivarotana tànana faharoa taloha aho nieritreritra ny hamio vovoka, akanjo XXL izay misy fofona manitra [...] more
Loharano "Mitovy hevitra ve ny Silamo rehetra?" Ity no fantsona Youtube ny Jobily. Ny manelingelina, ny fomba fijery samihafa ny silamo enina dia resahina ao. Ao amin'ny [...] more
Ny sakafo mahazatra an'ny mpianatra, na ny olona iray manana phobia mahandro fahandro aza dia mijery isaky ny hariva toa izao: Miantso saosy. Na dia misy ambaratonga ho an'ny [...] more
Mandeha eny amin'ny toeram-pivarotana ianao ary avelao halaim-panahy amin'ny tolotra ianao - any amin'ny counter meat dia misy akoho 100g ho an'ny 70 cent fotsiny ao [...] more
3 nizara1 fanehoan-kevitra11 Votes
Ny eritreritro voalohany rehefa nahare fa misy fitaratra mahatsapa fihetseham-po dia: tonga tao anatin'ny hoavy mahatsiravina sy fisainana manambola izahay. Avy eo natsipy [...] more
Iza ireo olona ao ambadiky ny afisy? Iza no nanao afisy? Fanambarana inona no azonao tadidinao taty aoriana? Akaikin'ny ranomasina [...] more
Toy ny mahazatra amin'ny kafe amin'ny maraina: dokambarotra amin'ny vokatra vidiana. Matetika dia fantatry ny olona ankehitriny fa ny dokambarotra [...] more
Nandritra ny fialan-tsasatra telo herinandro (fivelomana) tany amin'ny Nosy Canary tamin'ny ririnina dia tsy nikasa na inona na inona izahay - tsy trano hipetrahana, tsy misy fitsangatsanganana, tsy fitaterana. Nanidina fotsiny izahay [...] more
Fotoana taloha izay dia nataoko farany ny fampisehoana "Zoma ho an'ny Hoavy" any Regensburg. Nofinofiko ho ahy manokana, satria ny [...] more
Fitokonana manerantany amin'ny zoma manaraka, 20. Septambra an'arivony natao hiaro ny toetr'andro (na latsaka ny fandringanana). Ny topimaso momba ny demôsa miaraka amin'ny rohy amin'ny daty sy ny tsirairay avy [...] more
5 nizara2 fanehoan-kevitra11 Votes
Androany, nanomboka ny dingana vaovao ny fikambanan'i Germanwatch sy ny tontolo iainana: taorian'ny 14 teo am-pelatanan'ny fikambanana dia nitari-dàlana i Klaus Milke [...] more
in Alternative sy hevitra, Germany, Ny fanjifana maharitra, Videos
in Alternative sy hevitra, Ny fanjifana maharitra, Tips
Te hampivoatra ny eco-balananao ve ianao mandritra ny fitahirizana vola? Betsaka ny mety. Azonao atao ny manamboatra zavatra tranainy, fanarenana indray any New Germany. Any amin'ny tanàna maro any [...] more
"Indray andro, ny fiara sy ny kamiao tsirairay dia afaka miaraka amin'ireo sela mahery mandeha neutrino izay manovo ny angovo avy amin'ny taratra rehetra. Ho an'ny fitomboan'ny angovo fotsiny [...] more
Izany no fanekena nataoko tamin'ny mpitsabo tsy nanana sisin-tany
Dokotera tsy manana fetra - Iza izahay ary inona no ataontsika
Meksika: Ny Rarámuri dia miady amin'ny fisiany
Tsy mampihorohoro i Eren Keskin
Ajanony ny fampijaliana: ny lovanay - ny ho avintsika
in Alternative sy hevitra, Initiatives sy fangatahana, Videos
Ahoana ny fandrahonan'ny RWE Hambacher ny ala sy ny vohitra